I-Aries kunye neCancer idibanisa i-personae emibini eyahlukileyo, kwaye uqaphele isicetyiswa ngamandla. Uthando oluthandanayo lukhokelela ngokukhawuleza ukuthukuthela nokucaphuka, ngenxa yezibonakaliso ezimbini ezinobunzima be-Zodiac.
Ekuqaleni, i-Aries ibonisa umnqweno omkhulu kwaye ilandele iCrab ngendlela yothando ethumela izibonakaliso zothando lokwenene. Ukuba ama-Aries yintombi, unesibindi ekuthandeni kwakhe, kwindoda yokuqala yeCrab. Uthando othandweni lububonakaliso kwaye luya kuqina.
Ukudlala ngothando kunye nokuphendula - njengefowuni kunye nempendulo kwintlango-kungabonakala kwendalo ekuqaleni. Umntu onamahloni Unomdla weCancer akayi kucinga ukuba inenekazi lakhe luthando lukhokela ... ubuncinane ekuqaleni.
Amadoda angamaKhansela, kunye neempawu zamakhadikhadi, afana nococoon lwabo uthando, ngokukhusela. Amanqweno e-Cancer athatyathwa kumaqabane amabhinqa, kwaye oku kunokuvelisa okulungileyo kwi-Aries yabesifazane. I-Cancer inothando inqwenela ukuzinza komoya, nokuba ngaba benza njengento yonke epholile kwaye engaqhelekanga.
Etshisayo kunye neCold?
I-Aries ayisoloko iyayiqonda indlela echanekileyo ye-Cancer kwaye ikhula ingaphelelwa yimonde, ize idideke ngokubonakala kwayo. U-Aries okhuselekileyo ufumana, ukuxhamla emva kwayo yonke into ekhethekileyo, ukuqhubeka nokukhusela i-crab. KwiRam yokuzikhethela, umdlavuza unesidingo. Ukuba i-Cancer ikhuselekileyo, u-Aries 'ngokuthe ngqo uya kubonwa njengehlaselo. Ngaphandle kwentsingiselo, kunokubakho ubunzima obukhulu apha.
Ukuba intliziyo ebuhlungu yeCarcer ivula, kunokubakho ingxaki ukuba i-Aries flame iphuma ngokukhawuleza. I-Cancer iya kubuyela kwi-shell yayo, kwaye i-Aries iyakhathazeka kwaye iqhube phambili okanye yenza umonakalo omkhulu ngokuzama ukungena kwakhona kwilizwe labucala leCrab ngamandla. Le yinto enokuthi iguquke ngokukhawuleza - ukuba ibonakala ngathi iya ngasezantsi, ixesha elipholileyo liyakucetyiswa.
Ihlabathi leemvakalelo zeCancer lingabonakala li-claustrophobic, lixhomekeke kwaye linciphisa ama-Aries anamandla. Ukungaqiniseki, inxeba yeCarcer ezama ukuxhoma kwi-Aries ingabamba iminyaka emininzi ngaphambi kokuba ihambe. Kule meko, iCrab ilungile kunye nomntu onokuqhubekayo kwisebe lomonde. I-Aries ephumelela ekubekeni, idinga abantu basekhaya ukuba bayimncedise, bangazami ukugubungela othandekayo ngenxa yokwesaba.
Ukuba lo mbini uwenza ngokutshatyalaliswa kokuqala kokuhlangana kwabo, kunokuphela kokuba ngumngeni onomdla, onomdla. I-Aries ikhuthaza umdlavuza ukuba uvumeleke ukwesaba kwabo kwaye "yenze nje," kwaye iCarcer ivula iRam ukuya kwiqondo elide.
I-Aries enesibindi ikhuthaza umdlavuza ukuba unqobe ukungaqiniseki kwaye usebenze, endaweni yoko usabela. I-Crab eguguzelayo ngokuzithethelela iya kuxelwa ukuba ibambe iinqongo kwaye ithathe ulawulo. Isiqhelo esihle sokuzimela ngokuzimeleyo yinto edlalwa yintsholongwane yasekhaya. I-Aries eyenzile indlela yakhe, ngaphaya kwemilindelo yentsapho, itshabalalisa nayo kwiCarcer, nayo.
Yintoni umdlavuza onika uRam? I-Crab isilumko esilumkileyo ibonisa umlilo u-Aries ukuba unqobe njani ukutshisa. Kwaye ukuba iCarcer yiyo eyenza isidleke, yenza isiphephelo se-Aries kunye nendawo yokuyizalisa kwakhona.
Ingcamango yokugcina imililo yomlilo idibene idibanisa ezi zibini. Le ngqungquthela inokutshata nomoya ophefumlelweyo kunye nokuzinza kwengqondo enomdla weCarcer.
Ngaphesheya: ukomelelo lwengqondo; amanzi + umlilo = umbane; Bobabini banjengomntwana xa okwangoku.
Ngaphantsi: engenakuqonda kwaye enokukhathazeka kakhulu; ukulimala; imimoya yokunciphisa kunye nokuvutha komsindo; ingxaki yokuqonda uhlobo lomnye.
Umgangatho kunye ne-Element: iKhadimali yoMlilo (ama-Aries) kunye neCardinal Water (Cancer)
Funda malunga ne- Dark Side ye-Aries.
Ama-Aries kunye neCancer Love Stories
Umfundi "Izulu eliThunywayo" libhala: "Asizange sicacise ... Ndazama ukujonga ngaphaya kwayo yonke into kodwa kwakunjengobunetyhefu. Njengokuba kukho into ethi" akusiyo kuwe "ndandithandana kakhulu (kungekhona ngenxa yokuba wayekhangeleka kakhulu) ... hmm. Kodwa ubuhlobo buphela bubi ...
ingatsho ukuba i-100% inxulumene naye ngokuba ngu-Aries ... kodwa xa ndifunda ngakumbi malunga nayo ... inkwenkwe ingqiqo. "
INgqina Lobuxoki LikaMariya
Iimpawu eziziwayo zoLwazi kunye neNwabo
Indlela Yokufunda Incwadi Enzima
Kutheni iibhontshisi zikunika iGesi
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iIniareare
Indlela yokuchonga i-Ford Expedition Transmission Problem?
Isicwangciso seKharityhulam yeSikolo soPhakamileyo seSifundo seSifundo